Tsy ampy ny mpandraharaha ny fonja eto Madagasikara hoy ny ministeran’ny Fitsarana – Kolo Tv du 20 fevrier 2019 | NEXTHOPE RANARISON Tsilavo Corruption de la justice à Madagascar
Corruption MadagascarTsy ampy ny mpandraharaha ny fonja eto Madagasikara hoy...
Corruption MadagascarDétention préventive à Madagascar, jusqu'à 27 ansNEXTHOPERANARISON Tsilavo
Tsy ampy ny mpandraharaha ny fonja eto Madagasikara hoy ny ministeran’ny Fitsarana – Kolo Tv du 20 fevrier 2019
Manodidina ny resaka fonja izay hatrany dia lesoka goavana ary miteraka fahavakisan’ny fonja matetika eto Madagasikara ny tsy fahampian’ny mpiambina, izay raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny ministeran’ny fitsarana tamin’ity androany ity. Michella Ranarijaonina
Tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny zava-mitranga eny anivon’ireo fonja eto Madagasikara, ohatra amin’izany eo amin’ny resaka fiambenana ny voafonja. Tsy ampy ny mpiambina na ny mpandraharaha ny fonja. Antony iray mahabetsaka ny fonja vaky raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny ministeran’ny fitsarana.
Marina dia marina tokoa hoe misy ny lesoka mahakasika ny fahavakian’ny fonja, raha ny totalin’ny voafonja rehetra rehetra eto Madagasikara moa izany no lazaina dia eo amin’ny 22 000 any ho any. Nefa raha ny mpiandry fonja izany an araka ny tatitra voaray dia any amin’ny mpiandry fonja 1 ho an’ny voafonja any amin’ny 20 any ho any ngamba hoe lesoka ngambany izay hoe tsy ampy ny recrutement ireo mpandraharahan’ny fonja izay hiambina an’ireto voafonja ireto.
Ankoatran’ny tsy fahampian’ny mpiambina eny anivon’ny fonja tahakan’ny zava-nitranga tao amin’ny fonjan’ny Tsiroanomandindy, tsy ampy ihany koa ny atontan-taratasy hahafahana mamantatra ireo gadra tafatsoaka, vokatry ny tsy fahampian’ny mpiasa eny anivon’ny fonja izay miteraka tsy fahanaraha-maso ireo olana rehetra ireo, raha ny fanadihadiana natao. Ho an’ny raharaha fonjan’ny Tsiroanomandidy, mitohy ny fanadihadihana rehetra hoy ny eo anivon’ny ministeran’ny fitsarana.
Aiza ho aiza amin’izao ilay raharaha Tsiroanomandidy?
Raharaha Tsiroanomandidy, efa misy ny fepetra izay noraisin’ny ministeran’ny fitsarana, efa nohamafisiko araka ny voalazako teo ny sécurité-ny fonja any Tsiroanomandidy amin’izao fotoana izao. Efa manao ny asany ihany koa ny mpitandron’ny filaminana rehetra rehetra any sy izay misy moa ny atao groupe volant d’intervention rapide izay aty amin’ny fandraraharahana ny fonja, dia efa nandefa izay ihany koa ny avy ao amin’ny ministeran’ny fitsarana hanamaro isa ireo miaramila sy zandary izay manao ny recherche sy ny capture an’ireo voafonja rehetra rehetra nilefa ireo.
Raha tsahivina, tafiditra tanteraka ao anatin’ny politika ankapoben’ny fanjakana ny fanavaozana ireo fonja eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin’izany ny fananganana fonja vaovao fa eo ihany koa ny fanatsarana ny fiaraha-monina eny anivon’ireo fonja manerana an’i Madagasikara
Previous articleCorruption à Madagascar : gendarme – police – justice, le tiercé gagnant – Expressmada du 19 février 2019
Next articleAfrobaromètre 2018 sur la corruption à Madagascar – 69% de la population craignent des représailles après dénonciation – Midi madagasikara du 20 février 2019